တရုတ်စကားပြော ပညာဒါနသင်တန်းများ။ | Language Century Language Century
9:55 AM C-News , Chinese
နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်နီးပါး အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ပညာဒါနကျောင်းကို ကြွလှမ်းခဲ့ပါနော်။
ကမ္ဘာ့ဒုတိယဘာသာစကားဖြစ်သော တရုတ်စကားကို လေ့လာရန် သင် စိတ်ဝင်စားပါသလား???
ဘာသာစကားကို သင်ယူတတ်မြောက်ထားခြင်းဖြင့် လူမှုဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်တစ်ခုခုတွင် သင် ဝင်ဆံ့လိုပါသလား???
ဘာသာစကားကို စိတ်ပါဝင်စားသော မိတ်ဆွေများအတွက် အခမဲ့သင်ကြားပေးနေသော ပညာဒါနကျောင်းတော်ကြီးတွင် ကြွရောက်လေ့လာရန် ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။
> သန့်ရှင်းသပ်ရပ်၊ ကျယ်ဝန်းပြီး ဆိတ်ငြိမ်သော Aircon စာသင်ခန်းမများ
> စေတနာ့ဝန်ထမ်း သမ္ဘာရင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ
> ဆန်းသစ်ကောင်းမွန်သော သင်ကြားနည်းစနစ်များ
> နွေးထွေးသော ဆက်ဆံမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ
> ပရဟိတ ပညာရေးပို့ချမှုများ
မိတ်ဆွေများဘက်မှ သင်ကြားလိုစိတ်၊ တတ်မြောက်လိုစိတ် တစ်ခုတည်းကိုသာ နှလုံးသားထဲထည့်ပြီး ကြွလှမ်းခဲ့ပါ။
မြန်-ကောင်း-သက်သာ တည်ရာမှန်သည့် "မနောရမ္မ ပညာဒါန ကျောင်းတော်ကြီး" မှ မိတ်ဆွေများကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေပါသည်။
Chinese for all Page ၏ Admin ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးနေသော တရုတ်စကားပြောသင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
Thur-Fri 9:00-10:30 am (စကားပြော)
Thur-Fri 10:30-12:00 am (အရေး၊ အဖတ်၊ အသံထွက်)
Thur-Fri 12:30-2:00 am (တရုတ်သဒ္ဒါ)
Sat-Sun 8:30-10:00 (စကားပြော)
Sat-Sun 1:30-3:00 (စကားပြော)
စကားပြောတန်းခွဲတွင် သဒ္ဒါပုံစံများနှင့်တွဲဖက်ကာ မိမိပြောလိုသည့် စကားများ၊ ဝါကျများကို မိမိဘာသာ ဆက်စပ်တွေးတောပြီး ပြောဆိုတတ်စေရန်၊ ဝါကျများကို အလွတ်ကျက်ရန်မလိုဘဲ ဝေါဟာရ သိရုံမျှဖြင့် လက်တန်းပြောဆိုတတ်စေရန်၊ အချိန်တိုအတွင်း စနစ်တကျ ပြောတတ်ဆိုတတ်၊ ပြောရဲဆိုရဲနိုင်စေရန် အထူး လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပါသည်။
အရေးအဖတ်တန်းခွဲတွင် တရုတ်စာလုံးများ၏ အခြေခံ စုတ်ချက် အဆင့်ဆင့်မှစ၍ စာလုံးများ၊ စာကြောင်းများ ရေးသားခြင်း၊ ဖတ်ရှုခြင်း၊ bpmf အသံထွက်များကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးခြင်း တို့အပြင် တရုတ်အဘိဓာန် အသုံးပြုနည်းတို့ကိုပါ တွဲဖက် သင်ကြားပေးပါသည်။
သဒ္ဒါတန်းခွဲတွင် တရုတ်သဒ္ဒါကို အခြေခံ ဝါကျဖွဲ့စည်းပုံမှစ၍ စကားစုများ၊ စကားဆက်များ၊ အထူးပြုပုံများ၊ တရုတ်ဝါကျ ရေးဖွဲ့ပုံများ စသည်တို့ကို လွယ်ကူရိုးရှင်းသော သင်ရိုးပုံစံများဖြင့် သဒ္ဒါနည်းလမ်းကျကျ စနစ်တကျ ရှင်းလင်းသင်ကြားပေးပါသည်။
အရှေ့ဥယျာဉ်တိုက်၊ ဗဟိုလမ်း (ရှမ်းလမ်း)၊
ရှမ်းလမ်း ဓာတ်ဆီဆိုင် မျက်စောင်းထိုး
Tel : 01-537026 , 01-518024
နှဈပေါငျးနှဈဆယျနီးပါး အောငျမွငျစှာ ရပျတညျနတေဲ့ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ တဈခုတညျးသော ပညာဒါနကြောငျးကို ကွှလှမျးခဲ့ပါနျော။
ကမ်ဘာ့ဒုတိယဘာသာစကားဖွဈသော တရုတျစကားကို လလေ့ာရနျ သငျ စိတျဝငျစားပါသလား???
ဘာသာစကားကို သငျယူတတျမွောကျထားခွငျးဖွငျ့ လူမှုဆကျဆံရေး နယျပယျတဈခုခုတှငျ သငျ ဝငျဆံ့လိုပါသလား???
ဘာသာစကားကို စိတျပါဝငျစားသော မိတျဆှမြေားအတှကျ အခမဲ့သငျကွားပေးနသေော ပညာဒါနကြောငျးတျောကွီးတှငျ ကွှရောကျလလေ့ာရနျ ဖိတျချေါပါရစေ။
> သနျ့ရှငျးသပျရပျ၊ ကယျြဝနျးပွီး ဆိတျငွိမျသော Aircon စာသငျခနျးမမြား
> စတေနာ့ဝနျထမျး သမ်ဘာရငျ့ ဆရာ၊ ဆရာမမြား
> ဆနျးသဈကောငျးမှနျသော သငျကွားနညျးစနဈမြား
> နှေးထှေးသော ဆကျဆံမှုနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား
> ပရဟိတ ပညာရေးပို့ခမြှုမြား
မိတျဆှမြေားဘကျမှ သငျကွားလိုစိတျ၊ တတျမွောကျလိုစိတျ တဈခုတညျးကိုသာ နှလုံးသားထဲထညျ့ပွီး ကွှလှမျးခဲ့ပါ။
မွနျ-ကောငျး-သကျသာ တညျရာမှနျသညျ့ "မနောရမ်မ ပညာဒါန ကြောငျးတျောကွီး" မှ မိတျဆှမြေားကို နှေးထှေးစှာကွိုဆိုနပေါသညျ။
Chinese for all Page ၏ Admin ကိုယျတိုငျ သငျကွားပေးနသေော တရုတျစကားပွောသငျတနျးမြားကို ဖှငျ့လှဈထားပါသညျ။
Thur-Fri 9:00-10:30 am (စကားပွော)
Thur-Fri 10:30-12:00 am (အရေး၊ အဖတျ၊ အသံထှကျ)
Thur-Fri 12:30-2:00 am (တရုတျသဒ်ဒါ)
Sat-Sun 8:30-10:00 (စကားပွော)
Sat-Sun 1:30-3:00 (စကားပွော)
စကားပွောတနျးခှဲတှငျ သဒ်ဒါပုံစံမြားနှငျ့တှဲဖကျကာ မိမိပွောလိုသညျ့ စကားမြား၊ ဝါကမြားကို မိမိဘာသာ ဆကျစပျတှေးတောပွီး ပွောဆိုတတျစရေနျ၊ ဝါကမြားကို အလှတျကကျြရနျမလိုဘဲ ဝေါဟာရ သိရုံမြှဖွငျ့ လကျတနျးပွောဆိုတတျစရေနျ၊ အခြိနျတိုအတှငျး စနဈတကြ ပွောတတျဆိုတတျ၊ ပွောရဲဆိုရဲနိုငျစရေနျ အထူး လကေ့ငျြ့သငျကွားပေးပါသညျ။
အရေးအဖတျတနျးခှဲတှငျ တရုတျစာလုံးမြား၏ အခွခေံ စုတျခကျြ အဆငျ့ဆငျ့မှစ၍ စာလုံးမြား၊ စာကွောငျးမြား ရေးသားခွငျး၊ ဖတျရှုခွငျး၊ bpmf အသံထှကျမြားကို စနဈတကြ လကေ့ငျြ့ပေးခွငျး တို့အပွငျ တရုတျအဘိဓာနျ အသုံးပွုနညျးတို့ကိုပါ တှဲဖကျ သငျကွားပေးပါသညျ။
သဒ်ဒါတနျးခှဲတှငျ တရုတျသဒ်ဒါကို အခွခေံ ဝါကဖြှဲ့စညျးပုံမှစ၍ စကားစုမြား၊ စကားဆကျမြား၊ အထူးပွုပုံမြား၊ တရုတျဝါကြ ရေးဖှဲ့ပုံမြား စသညျတို့ကို လှယျကူရိုးရှငျးသော သငျရိုးပုံစံမြားဖွငျ့ သဒ်ဒါနညျးလမျးကကြ စနဈတကြ ရှငျးလငျးသငျကွားပေးပါသညျ။
အရှေ့ဥယြာဉျတိုကျ၊ ဗဟိုလမျး (ရှမျးလမျး)၊
ရှမျးလမျး ဓာတျဆီဆိုငျ မကျြစောငျးထိုး
တရုတ်စကား - တရုတ်စကားပြော - တရုတ်ဘာသာစကား - တရုတ်စာ - တရုတ်စကားပြောသင်တန်း - အွန်လိုင်း - သင်တန်း - သင်တန်းကျောင်း - တရုတ်ကျောင်း - တရုတ်ဘာသာ - တရုတ်သင်တန်း - တရုတ်စာပေ - စိုင်းဆိုင်ခမ်းဝ် - တရုတ်ဘာသာနည်းပြ - တရုတ်ဆရာ - မန်ဒရင်း -တရုတျစကား - တရုတျစကားပွော - တရုတျဘာသာစကား - တရုတျစာ - တရုတျစကားပွောသငျတနျး - အှနျလိုငျး - သငျတနျး - သငျတနျးကြောငျး - တရုတျကြောငျး - တရုတျဘာသာ - တရုတျသငျတနျး - တရုတျစာပေ - စိုငျးဆိုငျခမျးဝျ - တရုတျဘာသာနညျးပွ - တရုတျဆရာ - Chinese - CHINESE - chinese - Chinese Class - Chinese Language - Sai Hsai Kham - Chinese for all - Chinese Teacher - Hanyu - 汉语 - 漢語 - 语言中心 - Ever Top - EVER TOP - Foreign Language Center - Online Chinese Class - ONLINE - Second Language - ပညာဒါန - တရုတ်စကား ပညာဒါန - အခမဲ့ - မနောရမ္မ ပညာဒါနကျောင်း- ပညာဒါန - တရုတျစကား ပညာဒါန - အခမဲ့ - မနောရမ်မ ပညာဒါနကြောငျး- Manawramma - manawramma - MANAWRAMMA
min chit tu November 30, 2018 at 2:01 AM
min chit tu November 30, 2018 at 2:02 AM
Unknown January 22, 2019 at 8:02 PM
တက်လို့ ရသေးလား Sat-Sun
Unit-1 The Calendar (ပြက္ခဒိန်)
မကြာမီ ကျင်းပတော့မယ့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုကြမယ့် ညီ၊ညီမငယ်လေးများအတွက် အင်္ဂလိပ်ဖတ်စာအုပ်သင်ရိုးထဲက သင်ခန်းစာများကို အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်၊ ...
မျောက်ဘုရင် စွန်းဝူခုန်း သရုပ်ဆောင်မင်းသား။
တိဗက်လူမျိုး 藏族 (Tibetan) တွေအကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာ...
豆腐 တို့ဖူး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သမိုင်းကြောင်းလေး။
喝西北风 ဆိုတာ ဘာပါလိမ့်။
成狗 ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာလဲ။
怎么 နှင့် 怎么样 ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ။
不 နှင့် 没有 အငြင်းနှစ်ထပ်ပုံစံ။
我 ကဲ့သို့ အဓိပ္ပာယ်ရသော ဝေါဟာရများ။
Online မှာ တရုတ်စကား လေ့လာမယ်။
ta သူ - စာလုံးပေါင်း ဘယ်နှစ်ခုရှိသလဲ။
ဘော်လုံးပွဲ ကြည့်ရတာ ဝါသနာပါသလား။
ဘယ်နိုင်ငံက အစားအစာက ပိုကောင်းလဲ။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၅၁ - 匹
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၅၀ - 食
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၄၉ - 冷
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၄၈ - 重
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၄၇ - 半
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၄၆ - 易
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၄၅ - 象
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၄၄ - 高
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၄၃ - 房
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၄၂ - 刀
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၄၁ - 尺
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၄၀ - 画
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၃၉ - 外
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၃၈ - 文
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၃၇ - 都
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၃၆ - 分
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၃၅ - 自
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး - ၂၃၄ - 到